Jubaland oo UNHCR ku eedaysay in ay si u la kac ah u abuureyso musiibo xaalad bini’aadantinimo | BuhodlePost.com
Jubaland oo UNHCR ku eedaysay in ay si u la kac ah u abuureyso musiibo xaalad bini’aadantinimo
Narobi, Kenya —Sargaal Sare oo ka tirsan Dowlad Gobaleedka Jubaland ayaa Arbacadii si weyn uga deyriyay mashruuca Qaramada Midoobay (QM) iyo Hay’adaha kale ee Caalamiga ay dib ugu soo celinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee rubuc qarniga ka badan Qaxooti ahaan ugu xareysnaa xeryaha Dhadhaab iyo IFO, taas oo uu sheegay in ay, “Si u la kac ah u abuurayaan Musiibo Xaalad bini’aadantinimo ah.”
Madaxa Guud ee Hay’adda Qaxootiga u Qaabilsan Dunida Filippo Grandi oo Talyaani ah ayaa dhawaan, 18-kii Dicember 2017, yimid magaalada Kismaayo, halkaas oo uu ka sheegay in uu u yaboohayo sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen guryo, waxbarasho iyo waxii ay ku noolaan lahaayeen.
Taniyo intii ay billowday qorshahan dib u celinta Hay’adda QM u qaabilsan Arrimaha Qaxootiga iyo kuwa shiraakada kula ah ee hay’adaha gargaarka aan dowliga aheyn waxa ay dib ugu celiyeen Jubaland oo kaliya dad tiradoodu ka badan tahay shan iyo labaatan kun (25,000) , kuwaas oo uu sheegay Sargaalkan u hadlay Jubaland in “Sidii xoolaha oo kale meel si deg-deg ah la isugu soo uruuriyay.”
Gudoomiyaha Jubada Hoose ee Dowlad Gobaleedka Jubaland ayaa laanta Af Soomaaliga ee VOA u sheegay in dadka la soo celiyay ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan is la xeryihii QM uga ooday Kiiniya 27 sano ka hor, ka dib markii ay waayeen waxyaalihii aas-aaska u ahaa noloshooda.
“Qorshahaas (UNHCR) waxa aad moodaa in uu wali yahay mid curyaan ah oo sidii Jubaland iyo Hay’addaas ku heshiiyeen aan u socon, taas oo qorshayaashii loogu talagalay ee ahaa in ay dadku helaan goob ku haboon, caafimaad, waxbarasho iyo biyihii ay ku noolaan lahaayeen. Ma aha in guryo inta la dhiso sida xoolaha la isaga xareeyo dadka,” ayuu yiri, Cabdirashiid Cali Gooni isaga oo ku sugan dalka Kiiniya.”
“Dhulka la dajiyay muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa ay ahaayeen kuwo dad kale ay leeyihiin .”
Hay’addan Qaramada Midoobay ee UNHCR oo masuuliyadeedii ku wareejisay hayo’ado kale, ayuu hadalka Sargaalkan samcad-darro aad u weyn ku noqon karaa maadaama wali calaamad su’aal saaran tahay qaabka ay u maamusho malaayiinta Dollar ee lagu maalgaliyo hay’adan, si ay hawlaha QM ugu xilsaaratay ay si hufnaan ah ugu gudato.
Waxa uu Gudoomiye Gooni maalmihii u danbeeyay shirar uu kala hadlayo sidii la isugu furi lahaa Jubada Hoose kula lahaa Bulshada Caalamka iyo dalalka ay quseyso la dagaalanka Arga’gixisada. Isaga oo ka hadlayana waxa uu yiri:
“Waxa aan si rasmi ah isu la qaadanay dalalka aan xulafada ku nahay la dagaalanka arga’gixisada in duulaan cir iyo dhul ah oo lagaga sifeynayo Shabaab Jubada Hoose oo ay ka mid tahay Badhaadhe iyo magaalooyinka kale ee hoos yimaada, si la isugu xidho Kulbiyow, Badhaadhe iyo Kismaayo.”
Waxa uu Gudoomiyuhu sidoo kale sheegay, “Shirar aan dan u aheyn Jubaland oo ujeedkoodu ahaa daminta iftiintka u soo baxay Jubaland, kaas oo shakhsiyaad danahooda gaarka ah ka dhex arkay ay Kiiniya ku qabanayeen aan burburinay.”